Amagajethi e-elekthronikhi - kuyini?
Amagajethi - kuyini? Esikhathini sethu, lo mqondo utholakala ngokuqhubekayo empilweni yansuku zonke, ungakhulumi ngezitolo ezikhethekile ze-elekthronikhi noma izinkundla zekhompyutha. Izwi elithi "igajethi" lafika kithi kusukela olimini lwesiNgisi futhi luhunyushwa ngesiRussia ngokuthi "ukujwayela". Ngamanye amazwi, amagajethi kukhona amadivayisi kagesi. Inhloso yabo eyinhloko ukusiza umuntu wanamuhla ekuphileni kwakhe, ukumnika ukukhanya okukhulu nokucebile, okulula nokududuza.
Amagajethi okuqala avela phakathi nekhulu lama-20. Kodwa-ke, ngokuhamba kwesikhathi, kanye nokuthuthukiswa okusheshayo kwezobuchwepheshe, la madivaysi aguquliwe futhi athuthukiswa: ijubane lokusebenza landa, ukusebenza, okusebenzayo, ngenkathi kuba lula futhi kuhlanganiswa. Isibonelo, wonke umuntu uyakhumbula ukuthi umdlali wekassette uthathe indawo esikhundleni sakhe sokuqala - i-tape recorder enamandla, khona-ke kwakukhona amadivaysi akhiqiza ifomethi ye-mp3. Futhi esikhathini sethu, sesivele sinalo ikhono lokugcina ama-gigabytes womculo, usebenzisa ikhadi elincane, kodwa elikhulu kakhulu lememori ye-flash. Indaba efanayo ivela ngamakhompiyutha abo: ama-PC amancane ashintshile amadivaysi okuqala acindezelayo athatha amakamelo amaningana, ama-laptops nama-ultrabooks avela, futhi manje abantu abaningi basebenzisa amaphilisi compact kanye nama-computer e-pocket (PDAs). Ezimoto kakade zifakiwe hhayi nje abadlali bomculo, kodwa abezindaba zangempela bahlanganisa, futhi manje abagibeli banethuba lokulalela umculo kuphela, kodwa futhi ukubukela ividiyo.
Ukuqhubeka nesihloko sezimoto, awukwazi ukushiya enye igajethi ebalulekile - isistimu ye-GPS. Uma umshayeli engazi kahle indawo, ngosizo lwedivayisi angathola kalula indlela elula futhi engcono kakhulu eya endaweni. Ukubhaliswa kwevidiyo yekhamera yasemgwaqeni sekuye kwaba usizo olubalulekile lwamaphoyisa omgwaqo, okukuvumela ukuba ulandele ngokushesha izixhumanisi zomenzi wobugebengu.
Abaningi sebevele bawazisa zonke izinzuzo izijethi ezilethela empilweni yethu - ukuthi lokhu kuyisisetshenziswa esingenza imisebenzi engalindelekile. Ngakho-ke, isibonelo, kunezinkinobho ze-thermo ezikhethekile ezivumela itiye lokuphuza uma uxhumeke ku-PC yakho nge-USB port. Noma izibuko ezinekhamera eyakhelwe ngaphakathi, ikuvumela ukuthi ubuke amavidiyo ngefomethi ye-3D nokunye okuningi. Ngokuvamile, umcabango wabadali bamajejethi awukwazi imingcele!
Muva nje, ukuthandwa kwezinhlobo ezahlukene zokukhulumisana kuyanda. Ngosizo lwabo awukwazi ukushaya ucingo noma kuphi emhlabeni, kodwa futhi ubuke isithombe, uhlelo lwe-TV, ulalele umculo noma usebenze kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Futhi ngenxa yobuncane babo, bangakwazi ukulingana kalula esikhwameni sakho noma ephaketheni lakho. Yiqiniso, ukuze usebenzise igajethi, umuntu kufanele aqonde ubuchwepheshe bamuva be-digital, ngaphandle kwalokho le divayisi ehlakaniphile iyoba yinto yokudlala ebiza kakhulu engenzi lutho ngezandla ezingenayo. Noma kunjalo, kufanele kuqashelwe ukuthi abantu abambalwa nabambalwa bayazibuza: "Ama Gadgets - kuyini?"
Kufanelekile ukukhuluma ngokwehlukana ekilasini elibalulekile lamadivaysi, njengamajethi ehhovisi. Ngemuva kwakho konke, laba basizi abancane bayakuvumela ukuba unciphise ukulangazelela kwempunga impilo yansuku zonke futhi ugcwalise ngemibala usuku oluvuthiwe nolunye olusebenzayo. Isisebenzi ngasinye sifuna ukwenza indawo yakhe siqu ibe yinto yokuqala kakhulu yokuba nomona ngabalingani bakhe. Futhi amagajethi afanele lokhu futhi kungenzeka. Kukhona inombolo enkulu yamadivayisi akuvumela ukuba wenze lokhu. Isibonelo, i-air freshener yomuntu siqu, exhunywe kwikhomputha futhi edala endaweni yomsebenzi iphunga elimnandi, evikela abanye, kude nephunga elimnandi njalo. Noma isilwane esincane esincane esidansa kumculo, okufakwe kwikhompyutha - ukuzijabulisa okukhulu ngawe nabalingani bakho ngesikhathi sakusihlwa. Futhi kulabo abathanda ukuphazamisa ngezinye izikhathi ngesikhathi sokusebenza, udinga nje ukufaka ikhamera encane esheshayo elandelela zonke izinyathelo eziseduzane nomsebenzi wakho futhi ixwayisa ngokusondela, isibonelo, umphathi.
Ngakho-ke, manje uyayazi impendulo yombuzo: "Ama Gadget - iyini?", Ayini, nokuthi yiziphi izinzuzo ezingayiletha. Yiqiniso, noma kunjalo, sikhulume ngamadivaysi ambalwa kuphela kuleli klasi. Eqinisweni, kuneziningi zazo, futhi ngayinye yazo iyingqayizivele ngendlela yayo. Siyaqiniseka ukuthi olwandle olungapheli lwezinto zobuchwepheshe uzokwazi ukuthola idivayisi efanelekayo, ezoletha injabulo enkulu noma ube ngumsizi obalulekile.
Iyini i-Printer Toner?
Inkinobho ye-fn ayisebenzi: izimbangela nezixazululo
I-microphone ye-Condenser - ukukhetha kwabachwepheshe
Izilungiselelo ze-Rostelecom. Ukuxhuma nokusetha imishini
Ithebulethi enamandla kakhulu i-Google Nexus 10
Uchungechunge oluthi "visors olunamandla": nabalingisi izindima, ngesisekelo zomlando
Ukukhetha potty zezingane
Zokuhlala Real Estate eMoscow: Izindlu kanye Cottages